Maitiro ekuvharidzira peji rewebhu pane iyo iPhone kana iPad | IPhone nhau
Sezvo diki reimba richikura, nguva iri kuswedera apo, kungave nekudikanwa kana nekusavabvisa munharaunda yavo yemagariro, tinomanikidzwa kutenga mbozhanhare kana piritsi revana vedu. Kana isu tichida kuti natively tidzivirire kupinda kune chero mhando yezvirimo, yakanakisa sarudzo iripo parizvino pamusika iOS.
PaInternet, tinogona kuwana chero mhando yezvinyorwa, zvese zvinodzidzisa uye zvine mari, asi pamusoro pezvo, tinogona zvakare kuwana mamwe marudzi ezvinyorwa izvo isu zvatisingade kuti vana vedu vawane zvichienderana nezera ravo. , bhurawuza iyo mukati meiyo iOS yekugadzirisa sarudzo inotibvumira vhara mapeji ewebhu.
Kana vana vedu vadiki vatanga kushandisa yedu iPhone kana iPad nguva dzose, kana kana isu takamanikidzwa kutenga imwe kuti tishandise zvakasiyana, uye isu tinoda kudzikama zvizere tichiziva nguva dzese kuti haushanyire mamwe mapeji ewebhu ane hukama nazvo bonde, zvinodhaka, mhirizhonga, kupesana neSemite, hugandanga kana chero imwe nhaurwa, zvakanakisa zvatingaite vhara aya marudzi emapeji zvakananga kubva mudziyo.
iOS inoisa patinogona napo nhevedzano yemabasa atinogona kudzora, kwete chete zvirimo kuburikidza newebhu zvinogona kuwanikwa, asiwo mhando yezvinyorwa zvavanogona kuwana kuburikidza neTunes, zvekuti kana takatenga firimu rakaiswa pamusoro peanopfuura makore gumi nemasere nekuda kwemhirizhonga yayo, haizotambwe chero nguva isu tavimbisa zvirambidzo. Izvi zvinoitikawo nemabhuku kana mimhanzi inorongwa nezera.
1 Zvinhu zvekufunga usati wavhara mapeji ewebhu pane iOS
2 Ndezvipi zvinhu zvandinogona kuvharira kubva kuzvirambidzo zveIOS
3 Bvisa peji rewebhu pane iOS
Zvinhu zvekufunga usati wavhara mapeji ewebhu pane iOS
Chekutanga pane zvese, iyo nhamba yekushandisa kubva kune mwana ane Internet mukana inofanirwa kutariswa, nekuti kana achiwedzera kune iyo iPhone kana iPad, ane komputa yekuwana iyo Internet, zvinorambidzwa zvatingaite pane mudziyo hazviiti. sync nemamwe majaira, izvo zvinotimanikidza kugadzirisa zvese zvishandiso chimwe nechimwe.
Mukati meiyo Yevabereki Kudzora sarudzo dzinopihwa neMacOS, iyo Mac inoshanda sisitimu, hatigone kungovharira zvirimo zvavanowana maererano nezera, asi isu tinokwanisa zvakare kumisikidza maawa ekushandisa, zvese mukati mevhiki uye pakupera kwevhiki, kudzivirira vana vadiki kuti vasashandise zuva rese rakanamatira pakombuta.
Mukati meWindows 10, tinowanawo nhamba huru yesarudzo yekugadzirisa mhando yekuwana vana vedu pavanoshandisa komputa, kusanganisira nguva, kutenga uye zvemukati zvavanogona kuwana. Nehurombo, MuIOS hatina sarudzo yedu yenguva kana chirongwa kuti vana vedu vanogona kushandisa chishandiso, kunyange hazvo zvese zvichiita senge zvinoratidza kuti shanduro dzeramangwana dzichavepo.
Pane imwe sarudzo yekukwanisa kuvharira mukana weInternet pasina kusangana nechishandiso, kunyangwe sarudzo dzekugadzirisa dzisina kuwanda seidzo dzinopihwa neanoshanda masystem. Kuburikidza neiyo router, tinogona kusarudza kuti ndeapi machira ane Internet kuwana seta nguva yekuwana izvo zvavanazvo kubva paInternet kubatana uye iwo mapeji avanotadza kuwana zvakanyanya.
Ndezvipi zvinhu zvandinogona kuvharira kubva kuzvirambidzo zveIOS
iOS inotipa hurongwa hwezvirambidzo zvinotora muchidimbu chero chinhu kana mashandiro echigadzirwa, kunze kwekugona kwekumisikidza nguva yekushandisa. Kuburikidza neOS kurambidzwa tinogona kudzikisira kupinda kune:
Nyora mudziyo chidzitiro.
Kuwanika kune data renhare (kana chishandiso chine icho)
Limit mudziyo vhoriyamu
Iyo Safari browser
Mumhanzi Zvinyorwa uye Maprofiles
Iyo iBooks Book Chitoro
Iyo Podcast app
Isa, bvisa zvinoshandiswa pamwe nekurambidza chero mhando yekutenga mukati mezvishandiso.
Iyo inotibvumidzawo isu kuvharira kupinda kwemamuvhi, zvirongwa, mabhuku, kunyorera kunowanikwa muTunes Store kunyangwe kana vakatotorwa kare kuchinhu chedu.
Bvisa peji rewebhu pane iOS
Zvinorambidzwa izvo Apple zvinotibvumidza kuti tiite paIOS, hazvikanganisa chete yemuno Safari browser, asi zvinokanganisa chero bhurawuza rakaiswa pachigadzirwa, saka hatizofanirwe kuenda kubhurawuza nebrowser tichitsvaga sarudzo dzevabereki, chekutanga nekuti hapana uye chechipiri nekuti zvese zvinogumira zvinoshanda kune iyo system yese zvakafanana.
Para bvisa peji rewebhu pane iOS tinofanira kuenderera nenzira inotevera:
Chekutanga pane zvese tinokwira kumusoro Zvirongwa uye tinya pane General sarudzo.
Mukati meGeneral, isu tinotsvaga iyo sarudzo Zvinodzora.
Chekutanga pane zvese isu tinofanirwa kubaya Activate kurambidzwa, izvo zvinotimanikidza kuisa kodhi yekuvhura kune idzi sarudzo, nekuti zvikasadaro chero mushandisi anokwanisa kuwana mudziyo anogona kumisikidza kana kuvamisa sezvakakodzera. Iyo kodhi iyo iwe yaunokumbira, hatigone kukanganwa, nekuti zvikasadaro, isu hatizokwanise kuwana izvo zvinorambidzwa zvakare kunze kwekunge isu tadzoreredza mudziyo.
Ipapo tinotamira ku Inotenderwa zvemukati uye tinya pa Mawebhusaiti. Muchikamu chino tinowana zvitatu zvingasarudzwe: Ose mawebhusaiti, Limit zvevakuru zvinyorwa uye Mamwe chete mawebhusaiti.
Wese mawebhusaiti, titendese isu kuti tiwane chero peji rewebhu. Ndiyo sarudzo yakasimbiswa nekutadza.
Ganhurira zvemukati zvevakuru. Muchikamu chino tinofanirwa kuisa mawebhu kero atinoda kudzora kupinda, mukati mechikamu Usatombobvumira.
Mamwe mawebhusaiti chete. Iyi sarudzo inotibvumidza kuti tiwedzere kudzikamisa huwandu hwewebhu mapeji ayo madiki anogona kuwana. Akateedzana emapeji ewebhu ane theme yevana anoratidzwa natively uye kwatinogona kuwedzera mapeji matsva ewebhu kana kubvisa mamwe acho aripo.
Kuti udzivise kupinda kwemamwe mapeji ewebhu, tinya pa Ganhurira zvemukati zvevakuru. Nezvakanaka, kana iwe ukasarudza iyi sarudzo, iOS otomatiki inotarisira kudzora kupinda kune akapatsanurwa mawebhusaiti kune vateereri vakuru.
Kana isu tichida kubvumidza kupinda kune rimwe peji iro kana uchiita sarudzo iyi iOS yakarongedzerwa sevanhu vakuru, isu tinongofanira kuwedzera iyo nekudzvanya pa Wedzera webhusaiti mukati sarudzo Gara uchibvumira.
Kana isu tichida kudzora kupinda kune chero imwe peji rewebhu risingarongedzwe vanhu vakuru asi iro rinoratidza zvemukati zvinogona kuchinja maonero evana vedu echokwadi kana zvirimo zvisina kukodzera, mukunzwisisa kwedu, kwezera ravo, tinogona kuzviwedzera nekudzvanya on Wedzera webhusaiti mukati sarudzo Usatombobvumira.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvharidzira peji rewebhu